Dawladda Somaliya Oo Markii Ugu Horreysay Ka Hadashay Khariidadda Muranka Dhalisay Ee Itoobiya Daabacday - Jigjiga Online
HomeSomalidaDawladda Somaliya Oo Markii Ugu Horreysay Ka Hadashay Khariidadda Muranka Dhalisay Ee Itoobiya Daabacday
Dawladda Somaliya Oo Markii Ugu Horreysay Ka Hadashay Khariidadda Muranka Dhalisay Ee Itoobiya Daabacday
Muqdisho (JigjigaONline) – Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay Ethiopia kala hadashay sawirka khariidaddii ay wasaaradda arrimaha dibaddu soo daabacday ee markii danbe ay ka saartay website-kooda.
Wasiirka Arrimaha dibedda Somalia Ambassador Ahmed Ciise Cawad, ayaa VOA u sheegay in isla markii ay ka warheleen khariidadda la soo daabacay ay xidhiidh la sameeyen Ethiopia, kaddibna Ethiopia ay ka saartay sawirka khariiradda website-kooda.
Qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda Itoobiya ayaa shalay lagu yiri “Waxaan ogaanay in sawir qaldan oo aan la aqbali karin oo ah map-ka qaaradda Afrika uu ku dhuuntay website-ka wasaaradda arrimaha dibedda Itoobiya. Markii aan ogaanay durba waan ka saarnay website-ka.”
Qoraalka ayaa intaas ku daray “Ku kalsoonaada in kooxdeena ICT ay ka shaqeynayaan amniga website-ka. Waxaan si shalayto leh uga cudur daaranaynaa jahwareerka iyo is-faham waaga laga yaabo in dhacdadan ay sababtay.”